Caasimada Eritrea ee Asmara ayaa la sheegay in ay ku dhaceen lix gantaal oo laga soo ganay… – Hagaag.com
Caasimada Eritrea ee Asmara ayaa la sheegay in ay ku dhaceen lix gantaal oo laga soo ganay…
Posted on 29 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Safaaradda Mareykanka ee Eritrea ayaa shaacisay in 6 qarax ay ka dheceen caasimada Eritrea ee Asmara, habeenkii Sabtida. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Faransiiska, gantaaladan waxaa laga soo ganay waqooyiga gobolka Tigreyga, ka dib markii Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay la wareegida gobolka.
Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa intaas ku dartay saacada markey aheyd “10.13 pm 28kii November, 6 qarax ayaa ka dhacay Asmara.”
Bayaan ay soo saartay safaaradu waxay ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee deggen inay muujiyaan taxadar, guryahooda joogaan, si joogto ahna ay ula socdaan halka uu marayo dagaalka ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya Waxay sidoo kale uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ee aan ku sugneyn hadda Eritrea inaysan u safrin xilligan.
Duqeyn iyo dagaal
Ciidamada gobolka Tigreyga ee Itoobiya oo dagaal kula jira ciidamada federaalka ee Itoobiya ayaa horey waxay gantaallo ugu ganeen dalka Eritrea.
Habeenimadii Jimcaha, 4 diblomaasiyi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska in caasimadda Asmara lagu soo weeraray gantaallo laga soo ganay gobolka Tigray, iyadoo aan wax khasaaro ah geysan.
Shalay, Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu shaaca ka qaaday in howgalkii milateri ee ka socday Tigray uu si guul ah kusoo dhammaaday, kadib markii ciidamada federaalka ay ku guuleysteen inay la wareegaan magaalada Mekele ee xarunta gobolka, halka ciidamada Tigreyga ay xaqiijiyeen inay dagaalka sii wadayaan.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa khudbad uu ka jeediyay telefishanka wuxuu ku sheegay in ciidamadu ay awood u yeesheen inay galaan magaalada Mekele iyagoo aan waxyeello u geysan shacabka aan waxba galabsan.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Axmed ku soo qoray “hawlgalkii ugu weynaa wuxuu ku dhammaaday si guul ah … Haatan waxaa na horyaalla howsha muhiimka ah ee ah inaan dib u dhisno wixii burburay iyo hagaajinta wixii halaabay.”